Ungalutshintsha njani ishishini kwiakhawunti yobuqu kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Abantu abaninzi bathatha isigqibo tshintsha iakhawunti yakho yePinterest ngezizathu ezahlukeneyo ezenza ukuba kulunge kakhulu namhlanje. Nangona kunjalo, enkosi kwezi ntlobo zeemeko kunokwenzeka ukuba bakunike ikhefu okanye isikhokelo esitsha kwizimvo zabo ezinokubakho malunga neeprojekthi abanazo namhlanje.
Ngelixa kunokubonakala ngathi amanyathelo amaninzi ayafuneka ukufezekisa ishishini kunye nokuhamba kwiakhawunti yakho, akukho nto ininzi ekufuneka yenziwe ukuze kuzalisekiswe ukubakho. Inye kuphela into ekufuneka uyigcinile engqondweni yile iqonga liza kwenza uphononongo tshintsha.
Kwimeko yezizathu ezahlukeneyo zotshintsho, kunokwenzeka ukuba umkhombandlela wenkampani unokutshintsha okanye uhlale uphumle ukuze ufumane amathuba emisebenzi angcono. Ngaphandle kwamathandabuzo, umbono olungileyo ukungaqiniseki kwaye ulinde ngokuzolileyo okwenzekayo neqonga.
Ungayitshintsha njani iakhawunti uye kwishishini uye kwi-Pinterest?
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, iakhawunti yeshishini ilungele ukuba abantu bafumane kwangoko oko banako khangela ngaphakathi kweqonga. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ukuqala kwezinto zentengiso izinto ezininzi azisebenzi kwaye licebo elilungileyo lokuzinika ukuphumla okulungeleyo.
Ukunikwe konke oku, kunokwenzeka ukuqala ukutshintsha izinto ukuphucula imeko kunye nokufumana isisombululo kwiphepha. Kuya kuba lixesha lokuzisa izinto ukutshintsha umxholo kwaye uqhubeke noloyiso lwamanani.
Amanyathelo okutshintsha iakhawunti ukusuka kwishishini ukuya lobuqu
Ngena kwiakhawunti yakho yePinterest njengosuku oluqhelekileyo
Kuya kufuneka uye ngasekunene phezulu ukuze ukhethe ukhetho
Khetha useto ngaphakathi kwiphepha
Yiya phezulu ngasekhohlo kwaye ufikelele kuseto lweakhawunti
Guqula iakhawunti isuse kwishishini libe lelakho
Emva koko kufuneka uhlele igama leakhawunti kwaye uqale ukwabelana ngomxholo
Kwimeko apho iakhawunti iqinisekisiwe, kunokwenzeka ukuba uqhubeke nokonwabela esi sibonelelo. Ungathini xa kufuneka gcinani engqondweni kukuba iPinterest iya kwenza uphononongo rhoqo lomxholo ukuze kungabikho ngxaki ngenxa yokukopa okanye ukuvimba iphepha.
Ngaba ungabuyela kwiakhawunti yeshishini kwiPinterest?
Nangona ifundwa njengongenangqondo, ukuba kunokwenzeka ukubuyela kwiqonga leshishini emva kokwenza utshintsho. Kuya kufuneka ulandele la manyathelo akhankanywe apha ngasentla.
Nangona kunjalo, umbono olungileyo wokuphepha izimvo ezingapheliyo okanye imibuzo ngaphandle kwesizathu esivela kubasebenzisi, kukwabelana ngenqaku lenkcazo. Ngaphakathi kuyo kunokwenzeka ukuba ukucaciswa malunga nokwenzekileyo kubonakala.
Enkosi kwezi ntlobo zeemeko, kunokwenzeka ukuba akukho ngxaki malunga nokugenca okanye ilahleko yoyilo. Ngenxa yoku, abasebenzisi baya kuqala ukuthembela ngakumbi malunga okanye kwinto abayibonayo ukuphucula imihla ngemihla ngaphambi kwezinto abazibonayo kuthungelwano lwentlalo nakumaqonga onxibelelwano.
1 Ungayitshintsha njani iakhawunti uye kwishishini uye kwi-Pinterest?
1.1 Amanyathelo okutshintsha iakhawunti ukusuka kwishishini ukuya lobuqu
2 Ngaba ungabuyela kwiakhawunti yeshishini kwiPinterest?